किम र पुटिनबीच पहिलो पटक भेट, के भयो भेटमा ? | mulkhabar.com
किम र पुटिनबीच पहिलो पटक भेट, के भयो भेटमा ?
April 25, 2019 | 12:45 pm 71 Hits
काठमाडौं, १२ बैसाख ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनबीच पहिलो पटक भेट भएको छ।
बिहिबार रुसले आयोजना गरेको शिखरवार्तामा उत्तर कोरियाली नेता किम र रुसका राष्ट्रपति पुटिनबीच पहिलो भेट भएको हो। भ्लादिभोस्तोकको रस्की टापु शहरमा रहेको फार इस्टर्न फेडेरल युनिभर्सिटी परिसरमा सम्पन्न शिखरवार्तामा दुवै देशले बलियो सम्बन्धको प्रतिज्ञा गरेको जनाइएको छ।
रुसले उत्तरसँग कोरियाली प्रायद्वीपमा हुने तनाव अन्त्य गर्न भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।बुधबार नै किम रुस पुगेका थिए। बिहिबारको शिखरवार्तामा कोरियाली प्रायद्वीपको ’परमाणु समस्या’को विषयमा वार्ता भयो।
वैठकमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले कोरियाली प्रायद्वीपमा हुने तनाव अन्त्य गर्ने विषयमा रुसले उत्तरलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। किमले रुस र उत्तर कोरियाको सम्बन्धको लामो इतिहास भएको बताउँदै अझ बलियो सम्बन्ध होस् भन्ने इच्छा व्यक्त गरे।
यस वार्तामार्फत किमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो आर्थिक भविष्य अमेरिकासँग मात्र निर्भर छैन भन्ने देखाउन खोजेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ।
अमेरिकासँग गत फ्रेब्रुअरीमामात्र उत्तर कोरियाको शिखरवार्ता असफल भएको थियो। त्यस असफसल शिखर वार्तापछि उत्तरले रुसको सहयोग खोजेर अमेरिकालाई दबाब सृजना गर्न खोजेको जनाइएको छ।
गतवर्षको जुन महिनामा अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच पहिलो शिखर वार्ता भएको थियो। उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग क्षेप्यास्त्र निशस्त्रीकरण गर्ने अनौपचारिक सम्झौता गरेको थियो। त्यसयता कुनै क्षेप्यास्त्र परिक्षण नगरे पनि अमेरिकाले उत्तरमाथि लगाएको विभिन्न प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेपछि यसै वर्षको फेब्रुअरीमा ट्रम्प र किमबीच दोस्रो शिखर वार्ता भयो।
तर ट्रम्पले उत्तरमाथिको पूर्ण प्रतिबन्ध नखुलाउने बताएपछि वार्ता असफल भयो। उत्तरले अमेरिकाले पूर्ण प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ। अमेरिकासँग गत फेब्रुअरीको वार्ता अगाडि उत्तर कोरियाले चीनसँग समेत वार्ता गरेको थियो। अमेरिकासँगको वार्ता असफल भएलगत्तै उत्तर कोरियाली नेता किम रुस पुगेका हुन्। एजेन्सी
भेट भयो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमको, (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौं, २९ जेठ । अन्ततः विश्वलाई नै चकित पार्नेगरी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम एक आपसमा भेट…
उत्तर र दक्षिण कोरियाबीचको युद्ध ६५ वर्षपछि ‘अन्त्य
उत्तर र दक्षिण कोरियाबीचको युद्ध ६५ वर्षपछि ‘अन्त्य एजेन्सी, काठमाडौं, वैशाख १५, २०७५ – उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच औपचारिक…